Monday June 01, 2020 - 12:11:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ugu yaraan Shan qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen rabshado maalintii 6aad oo xiriir ah ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka.
Magaalada Minneapolis waxay shalay u aheyd maalin kale oo ay martigelisay rabshado dhiig badan ku daatay, saraakiisha booliska ayaa sheegay in 10 qof ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen isku dhacyada oo ka dhacayay xaafadaha ay ku badanyihiin dadka madoowga ah.
Magaalada Washington ee caasimadda ah ayaa lagasoo sheegayaa in ay ka socdaan isku dhacyo udhaxeeya ciidamada booliska iyo dad ubadan madoow oo ka caraysan falkii isbuucii lasoo dhaafay lagu dilay George Floyd oo asal ahaan kasoo jeeday qaaradda Afrika.
Wasaaradda arrimaha gudaha Mareykanka ayaa sheegtay in ay uyeertay ciidamada ilaalada ah ee sida gaarka ah u waraadiyeeya xarumaha dowladda, ugu yaraan 50 askari oo katirsan ciidanka gaarka ah ayaa si xun ugu dhaawacmay dibad baxyadii shalay dhacay.
Mas'uul u hadlay aqalka cad ayaa xaqiijiyay in Trump lageliyay god dhulka hoostiisa qodan oo kuyaal gudaha guriga cad kaasi oo loogu talagalay in madaxda lageliyo haddii ay halis lakulmaan.
Waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka kala ah New York, Chicago, Atlanta, Philadelphia iyo Los Angeles ayaa laga dareemayaa xaalad dagaal waxaana la arkayaa gaadiid gubanaya iyo weeraro lagu hayo xarumaha dowladda.
Warbaahinta maxalliga ah waxay sheegaysaa in kacdoonnada hadda ka socda Mareykanka ay yihiin kuwii ugu xooganaa muddo 50 sanadood gudahood ka dhaca wadanka Mareykanka.